Faransiiska oo ganaax goroda u galiyey haween muslimiin ah oo indho shareer xirtey – SBC
Faransiiska oo ganaax goroda u galiyey haween muslimiin ah oo indho shareer xirtey
Laba haween muslimiin ah ayaa noqdey haweenkii ugu horeeyey ee dalka Faransiiska kala kulma ganaax ku aadan xirashada indho shareerka kaasi oo laga mamnuucay dalkaasi bilooyin ka hor.
Hind Axmas oo 32 sano jir ah & Najate Ali oo 36 sano jir ayaa maalinimadii shaley lagu qaaday xukunkii ugu horeeyey oo ku aadan xirashada niqaabka taasi oo ku aadaneyd markii ay wajigooda dabooleen goobaha dadku isugu yimaadaan.
Haweenkan oo maxkamad la horkeenay gal dacwadoodkooda ayaan soo xaadirin gudaha maxkamada ka dib markii ay diideen inay wajigooda baneeyaan ama iska qaadaan indho shareerka.
Hind Axmas ayaa lagu ganaaxay $ 170, halka Nataje lagu amray inay bixiso $ 105 ka dib markii la sheegay inay niqaab dhameystiran ay ku xiratey isu soo bax lagaga soo horjeeday go’aanka indho shareer mamnuuca Faransiiska oo dhacay bishii May ee sanadkan.
Qaaliga maxkamada deegaanka Meaux ee duleedka magaalada Paris ayaa ganafka ku dhuftey dalab ka yimid dacwad ku oogayaasha ku aadanaa in labadan haweenka Muslimiinta loo diro dhaqan celin & tababaro ku saabsan muwaadinimada.
Markii uu dhacay xukunkaasi qareenka daafacaya haweenkan oo lagu magacaabo
Gilles Devers ayaa sheegay in macaamiishiisa ay ka qaadan doonaan racfaan xukunka ganaaxa, isagoo u cuskuday go’aankan oo soo baxay bishii April in uu yahay mid aan dastuuri aheyn.
Kenza Drider oo madaxweyne isu soo sharaxday
Sidoo kale haweenkan muslimiinta ah ayaa sheegay inay isu diyaarinayaan sidii ay kiiskooda ugu gudbin lahaayeen maxkamada xuquuqda aadanaha ee Yurub.
Dhinaca kale kadinka hore ee maxkamada waxaa soo istaagey haweenay lagu magacaabo Kenza Drider oo 32 sano jir oo Muslim ah si weyna ugu ololaleysa ka soo horjeedka go’aanka mamnuuca indho shareerka.
Hind Ahmas oo taagan maxkamada banaankeeda
Kenza Drider waxay mudo 11 ah sidatey indho shareerka waxaana ay shaaca ka qaaday goor sii horeysay inay u gali doonto xabsi xirashada indho shareerka.
Laakiin maalinimadii shaley Kenza Drider waxay shaaca ka qaaday go’aan aan laga fileyn ka dib markii ay shaacisey inay isu soo taagayso doorashada madaxweynenimo ee wadanka Faransiiska isla markaana la tartami doonto madaxweyne Nicolas Sarkozy si ay ugu ogolaato haweenka muslimiinta ah inay si xoriyad ah u xirtaan indho shareerka.
Go’aanka mamnuucista indho shareerka ee dalka Faransiiska ayaa wuxuu dhigayaa in qofkii lagu arko indho shareer ama niqaab isagoo xiran lagu ganaaco lacag dhan $ 250 iyadoo goobaha laga mamnuucay ay ka mid yihiin wadooyinka, dukaamada, maqaaxiyaha & waliba gawaarida.
Ragga ku qasba haweenkooda inay xirtaan indho shareerka ayaa la sheegay in lagu ganaaxayo lacag dhan $ 3500, iyadoo kiisaska qaarkoodna loo cuskanayo arimo la xiriira muwaadinimada.
Taliyaha Booliiska ayaa sheegay in xiligan Booliiska wadanku ay ku jiraan mashquul aad u fara badan oo ay la daala dhacaayan baacsashada indho shareerka haweenka xiran halkii ay dambiyada ka hortagi lahaayeen.
Maalqabeenka muslimka ah ee Faransiiska Rachid Nekkaz ayaa isagu sameeyey hanaan maalgalin oo uu ugu tala galay inay uu haweenka lagu ganaaxo indho shaareerka uu kaga bixinayo qarashkiisa isagoo si weyn go’aankaasi uga soo horjeeda.
Wadamada Yurub oo markii hore ku faani jirey xoriyada bini’aadanka & tan diimaha ayaa xiligan la soo baxay dhaqamo gurucan oo ku aadan in lagu xadgudbo wixii ay horey u sheegan jireen iyadoo talaabooyinka mamnuucista indho shareerka ay ka soo ifbaxayso wadamada Holand, Belgium & Talyaaniga.